Ifulethi elibanzi eduze kwaseWheaton College - I-Airbnb
Ifulethi elibanzi eduze kwaseWheaton College
Wheaton, Illinois, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Grant And Jennifer
U-Grant And Jennifer Ungumbungazi ovelele
Woza futhi ujabulele ukuvakashela isitshudeni sakho sase-Wheaton College ngenkathi uhlala uhambo olude ukusuka ekhempasini. Ifulethi lethu linamakamelo amabili okulala, ikhishi elifakwe kahle, elondolo, igumbi lokugezela kanye negumbi lokuphumula. Ifulethi lisendaweni yethu engaphansi enomnyango ozimele futhi womabili amakamelo okulala anamafasitela amakhulu anokukhanya kwemvelo okuningi. Kukhona indawo yokupaka imoto eyodwa ku-driveway yethu.
Izivakashi zinendawo yokupaka eyodwa ku-driveway yethu kanye nokufinyelela okugcwele kulo lonke ifulethi elinendawo yokungena ehlukile. Sicela ukuthi izivakashi zingasebenzisi igceke lethu noma indawo yangasese.
I-HDTV engu-47" ene- Apple TV
Siyathanda ukuhlala lapha ngoba kuyindlela elula kakhulu yokwehla intaba ukuya esitimeleni i-Metra, uzungeza ibhulokhi lokuya e-Wheaton College, eduze nePrairie Path yokuhamba/ukugijima, kanye nohambo lwemizuzu engama-20 ukuya ezindaweni zokudlela nezitolo zekhofi zedolobha lase-Wheaton.
Ibungazwe ngu-Grant And Jennifer
Sobabili sisebenza sisekhaya isikhathi esiningi futhi sijabule kakhulu ukukubingelela njengoba ufika! Sitholakala kakhulu uma udinga noma yini kodwa futhi siyakujabulela ukunikeza izivakashi indawo.
UGrant And Jennifer Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Wheaton namaphethelo